Ubengahlosile ukuba wumlingisi owoZalo
NOKUBONGWA PHENYANE | March 21, 2020
KULEZI ZINSUKU uma ubuka umdlalo Uzalo, abantu balandela kakhulu izindaba zabalingisi abasanda kujoyina lo mdlalo njengoba kusanda kuqala isizini entsha.
Kubalingisi abasha kukhona uFezile Makhanya, Thulani Shange, Nombulelo Mhlongo noSizwe Khumbuza.
Kuleli sonto ngibone kungcono ngicele ukuba nengxoxo noFezile Makhanya, ongemusha kwezokulingisa.
Indawo agcine ebonakala eyilingisa emdlalweni iThe Queen, yenze waba wundabamlonyeni futhi kwabatshazwa ikhono lakhe kulo mkhakha.
Kodwa le nsizwa yaseSikhaleni, eMpangeni, eneminyaka engu-36, ithi ukuba kwithelevishini ngenye yezinto eyayingazicabangi.
UFezile uveze ukuthi ukhule engumdlali webhola lombhoxo ohamba phambili futhi wayecabanga ukuthi yiwona ayezophila ngawo impilo yakhe yonke.
“Ngendlela engangiwumpetha ngayo kulo mdlalo ngaze ngahamba ngaya eThekwini, ngathola umfundaze kwesinye sezikole ngiyofunda khona ukuze ngiqhubeke nawo.
Kusenjalo ngaphinde ngathola omunye kwesiseGoli nakhona befuna ngizodlala kodwa nganqaba ngaqhubeka nokuhlala eThekwini.
Kulo mdlalo ubandlululo lwaluthe bhe kodwa ngadlula kulona kunjalo ngaze ngaya ePitoli ngayohlala nodadewethu, ngifuna umsebenzi,” kuchaza uFezile.
Uveze ukuthi ungene kwithelevishini enza izikhangiso, wagcina esedlulela ekubeni wumethuli wezinhlelo, waze waba wumlingisi.
“Udadewethu owangiphushela kulo mkhakha ngoba ethi ngingase ngibe nenhlanhla. Ngempela kwaba njalo njengoba ngaqala kwiChannel O, kwase kuba yiSABC1.
Ngiyawuthanda kakhulu lo mkhakha wokulingisa njengoba ukufundisa izinto ezihlukene ngempilo futhi sifunda lukhulu ezindaweni esisuke sizilingisa. Kule ndawo kaMpumelelo nje engibonakala kuyo manje kuZalo, ngifunde ukuthi baningi abantu besilisa abayizitabane kodwa abazifihlile ngenxa yokuthi bayesaba ukuthi abantu bazothini.
Ngiyijabulele kakhulu le ndawo futhi ngiyethemba ukuthi kukhona abazosizakala ngayo,” kuchaza uFezile.
Uthe yize esethola abesilisa abamshelayo njengoba becabanga ukuthi uyisitabane ngenxa yendawo ayidlalayo, uthe ubachazela kahle ukuthi ukuyilingisa akusho ukuthi uphila le mpilo njengoba eshadelwe.
“Ezinkundleni zokuxhumana abantu besilisa abayizitabane badidekile ngempilo yami kodwa ngiyabachazela ukuthi mina, cha anginankinga nabo kodwa ngeke ngikwazi ukwenza lokhu abakucelayo. Nginabo abangani abayizitabane, anginankinga nabo kodwa mina cha angisona,” kuchaza uFezile.
Uthe ujabule ngendlela isifundazwe iKwaZulu-Natal esikhula ngayo emkhakheni wokukhiqiza imidlalo esimkhulu kuleli.
“Kumele sizibonge izinkampani ezifana neStained Glass njengoba yenze into ebingacatshwangwa ngabaningi. Uma ufuna umsebenzi bekumele uye eGoli.
Kulo mdlalo sengiqedile ukuqopha. Kuwona futhi ithimba lonke lalo mdlalo ngiyalibonga ngendlela elingiphathe ngayo sisaqopha, ngisho nozakwethu konke bakuhambise kahle kwaze kwaba sekugcineni,” kuchaza uFezile.
Uthe okuzogqama manje emdlalweni wukuvela kwesayidi likaSbu (Simphiwe Majozi) abantu akade bengalazi njengoba uMpumelelo ezoliveza obala.
Uthe njengoba eseqedile ukuqopha kuZalo kuningi amatasa ngakho. NgoJuni uthe ezoqala abonakale emdlalweni iMuvhango, manje aseqopha kuwona.
Uthe wake wabonakala phambilini elingisa indawo kaMuzi kuMuvhango, azoqhubeka ayilingise namanje.
Uphinde waveza ukuthi maduzane kukhona isiteshi esizomemezela izinhlelo ezintsha azobe eyingxenye yezinye zazo, okuyinto emjabulisayo njengoba engahleli ngenxa yokuswela umsebenzi.